ပြည်တွင်းတွင် ရောင်းချရန် တိုယိုတာရတ်တစ်များ | တိုယိုတာရတ်တစ်ကားဈေးများ Carmudi Myanmar [Burma]
A/C: Front (26)
Cassette Radio (26)
Toyota Ractis 2011 G Grade 1300 CC Aircon Digital and Smart Key Push Start Back Parking Sensor Original Japan TV,Back Camera,AUX Output,USB Output, SD,Bluetooth,CD,DVD,Navigation Maps,4Handle,S...
2f ygn.push start.digital
Lks 199 ညှိနှိုင်း
Pearl White Toyota Ractis 2011 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks. ဘေးကင်းလုံခြုံမှုစနစ်များ...
Silver Toyota Ractis 2007 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ဘေးကင်းလုံခြုံမ...
Silver Toyota Ractis 2007 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ဘေးကင်းလုံခြုံမှုစနစ်များ...
Black Toyota Ractis 2009 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ဘေးကင်းလုံခြုံမှုစနစ်များ ...
Black Toyota Ractis 2011 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering,Push Start. ဘေးကင်းလုံခြုံမ...
Red Toyota Ractis 2012 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ဘေးကင်းလုံခြုံမှုစ...
Silver Toyota Ractis 2012 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ဘေးကင်းလုံခြုံမှုစနစ်များ...
Green Toyota Ractis 2007 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ဘေးကင်းလုံခြုံမှ...
Blue Toyota Ractis 2013 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ဘေးကင်းလုံခြုံမှု...
Black Toyota Ractis 2012 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering,Push Start. ဘေးကင်းလုံခြုံမ...
Silver Toyota Ractis 2008 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ဘေးကင်းလုံခြုံမှုစနစ်များ...
Pearl White Toyota Ractis 2011 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ဘေးကင်းလုံ...
Pearl White Toyota Ractis 2008 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ဘေးကင်းလုံ...
Silver Toyota Ractis 2008 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ဘေးကင်းလုံခြုံမ...
Silver Toyota Ractis 2012 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ဘေးကင်းလုံခြုံမ...
Silver Toyota Ractis 2009 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ဘေးကင်းလုံခြုံမ...
Silver Toyota Ractis 2012 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,TV,Navigation System,Power Locks. ဘေးကင်းလုံခြုံမှုစနစ်များ ပါဝင်သည်။ Airb...
Black Toyota Ractis 2009 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ဘေးကင်းလုံခြုံမှ...
Black Toyota Ractis 2011 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering,Push Start. ဘေးကင...
Silver Toyota Ractis 2011 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering,Push Start. ဘေးကင်းလုံခြုံ...
တိုယိုတာ ရပ်တစ်ကားတွေဟာ တိုယိုတာရဲ့ အသေးစား ဆပ်ကွန်ပတ်ကားလိုင်းထဲမှာ ပါဝင်ပါတယ်။ တိုယိုတာ အုပ်စုကနေ ထုတ်ပြီး တိုယိုတာ ဗစ်ပေါ်မှာ အခြေခံထားတဲ့ ထိုင်ခုံ (၅) ခုံရှိတဲ့ ကားတွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ၂၀၀၅ နှစ်ကုန်ပိုင်းလောက်မှာ မိတ်ဆက်ခဲ့ပြီး ရပ်တစ်ရဲ့ အဓိပ္ပယ်ကတော့ (ရန့်) ပြေးတာကနေ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း ဆင်းသက်လာတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဌင်းတွင် ၂၀၀၅ ကနေ ၂၀၁၀ ထိထုတ်တဲ့ ပထမမျိူးဆက်၊ ၂၀၁၀ကနေ နောက်ပိုင်းထုတ်တဲ့ ဒုတိယမျိုး ဆက်ဆိုပြီး ရှိပါတယ်။ ထိုမော်ဒယ် နှစ်မျိုးလုံးကို ပြည်တွင်း ကားဈေးကွက်မှာ တွေ့ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ပြည်တွင်းမှာတော့ ရပ်တစ်ဟာ ရောင်းအားနဲ့ ၀ယ်လိုအားကောင်းတဲ့ တိုယိုတာ ဘရန်ရဲ့ လက်အောက်မှာ ရှိတဲ့ ကားအမျိုးအစား တစ်မျိုးပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ပုံစံလှပပြီး ဒီဇိုင်းဆန်သစ်မှုကြောင့် လူကြိုက်များပါတယ်။
ပထမမျိုးဆက်မှာ အင်ဂျင် ၁၃၀၀ စီစီ၊ ၁၅၀၀ စီစီ ဆိုပြီး နှစ်မျိုးရပါတယ်။ ဒုတိယမျိုးဆက်မှာတော့ ၁၃၀၀ စီစီနဲ့ ၁၄၀၀ စီစီဆိုပြီး ရှိပြီး ၁၄၀၀ စီစီမှာ ဒီဇယ်တာဗို့ရပါတယ် မန်နျူးယယ်နဲ့ အော်တိုတို့ရှိပြီး ဂီယာအော်တိုမှာ ၇ချက်အထိ ရှိပါတယ်။ ဌင်းရဲ့ ၁၄၀၀ စီစီ ဒီဇယ်အင်ဂျင်ဟာဆိုရင် အတွင်းဖက် အင်တာကူးလ်လာတို့ပါဝင်ပြီး တိုယိုတာ ရဲ့ ပထမဦးဆုံး အလူမီနီယံ ဆလင်တာ ဘလော့ခ် အပိတ်နဲ့ တပ်ဆင်တဲ့ အင်ဂျင်ဖြစ်ပါတယ်။ ဌင်းရဲ့ လုပ်ဆောင်ရတဲ့ ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ ဆူညံမူလျော့ကျအောင်နဲ့ အလေးချိန်လျော့အောင်၊ လောင်စာသုံးစွဲမှု နဲ့ ကာဘွန်ဒိုင်အောက်ဆိုဒ် ထုတ်လုပ်မှုလျော့နည်း အောင်လို့ ဖြစ်ပါတယ်။ ဓာတ်ဆီ အင်ဂျင်ဖြစ်တဲ့ ၁၃၀၀စီစီ မှာတော့ ပစ်စတုန်းအဖြောင့် ၄လုံးသုံးပြီး Stop & Start လို့ခေါ်တဲ့ နည်းပညာကိုသုံးထားပါတယ်။ အင်ဂျင်တွေကိုလောင်စာ သုံးစွဲမှု နဲ့ ထုတ်လွှတ်မှု လျော့နည်းအောင် ရည်ရွယ်ခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
ရုပ်ထွက်ကတော့ ပထမမျိုးဆက်မှာကတည်းက ဆန်းပြားတဲ့ ဒီဇိုင်းနဲ့ ဖြစ်ပါတယ်။ အရှေ့ပိုင်းကစက်ရုပ်ကား တစ်စီးနဲ့ တူပြီး အနောက်ဖက်က လေးထောင့်စပ်စပ်နဲ့ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်ဌင်း အမျိုးအစားကို မီနီဗန်ထဲမှာ ထည့်ကြပါတယ်။ ဘေးမှန်မှာ မီးခြောက်တွေပါဝင်ပြီး မှန်တွေလည်း အမည်းနဲ့ ဖြစ်ပါတယ်။ အတွင်းခန်းအနေနဲ့လည်း ဒီဇိုင်းဆန်းပါတယ်။ ဒရိုင်ဘာဖက် ကားဒတ်ရ်ှဘုတ်ကို အလည်က ဂီယာဘောက်စ်အပါအ၀င် ၀ိုင်းဝိုင်းလေး ပြုလုပ်ပေးထားပြီး ဒီဇိုင်းဆန်းပါတယ်။ ဂီယာဘောက်စ်ကိုလည်း တကယ့် ကားကြီး မီနီ ဗန်ကြီးတွေ အတိုင်း ဒတ်ရ်ှဘုတ်မှာ တစ်ခါတည်း အထိုင်ပေးထားပါတယ်။ နောက်ခုံတွေကိုလည်း ခေါက်လို့ရအောင် လုပ်ပေးထားပြီး တံခါးပေါက်တွေကအစ ဒီဇိုင်းလှပ ပါတယ်။ ကားအနောက်ဖက်မှာ အန်တာနာတွေပါ ထည့်ပေးထားပါတယ်။ ၂၀၁၀ နောက်ပိုင်း မျိုးဆက်တွေမှာ ပိုပြီး အရှေကဖက် ကားမျက်နှာပြင်ကို တိုးမြင့်ထားပါတယ်။ မီးလုံးတွေကအစ ပြောင်းလဲသွားမှာ ဖြစ်ပြီး အရင် ရပ်တစ်တွေနဲ့စာလျှင်တော့ ရုပ်ပိုင်းက ကွာသွားပါတယ်။ နောက်ပြီး ဂီယာအုံကိုလည်း သတ်သတ် ကားဒတ်ရ်ှဘုတ်နဲ့ တွဲလျက် ပြုလုပ်ထားပေးပြီး ဒတ်ရ်ှဘုတ် အနေအထားနဲ့ ပုံစံကလည်း ပြောင်းသွားပါတယ်။
အဲယားကွန်း၊ ပါဝါ စတီယာရင်၊ လေအိတ်၊ ABS ဘရိတ်၊ ပါဝါ၀င်းဒိုးစတဲ့ အစိတ်အပိုင်းများ၊ လျှပ်စစ်မှန်၊ အော်တို ဂီယာ ၊ စမတ်ကီးနဲ့ တစ်ချို့မော်ဒယ်တွေမှာ အင်ဂျင် ပွန်စတပ်တွေပါ ပါဝင်ပါတယ်။
ပြည်တွင်းမှာ ၂၀၀၆ လောက် မော်ဒယ်ကနေ ၂၀၁၁ မော်ဒယ်လောက်ထိ အများဆုံးတွေ့နိုင်မှာ ဖြစ်ပြီး ကျပ်သိန်း ၁၁၀ ကျော်ကနေ ၁၆၀ လောက်ထိ ရှိပါတယ်။ ကျပ်သိန်း ၁၀၀ အောက် ရပ်တစ်တွေကိုလည်း ရနိုင်ပါတယ်။ တစ်ပတ်ရစ်ကိုပဲ ဈေးကွက်မှာ ၀ယ်ယူလျက်ရှိတဲ့ တိုယိုတာရဲ့ ဘရန်ထဲက ကားတစ်မျိုး ဖြစ်ပါတယ်။ ပြည်တွင်းကား ကုမ္ပဏီတွေကနေ အဆင်ပြေ လွယ်ကူစွာမှာ ယူနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
သုံးသပ်ချက်အနေနဲ့ ပြောရသော် ၁၃၀၀ စီစီရှိတဲ့ ရပ်တစ်တွေက အ၀ယ်များပြီး အော်တို ဂီယာကိုပဲ ရပ်တစ် အမျိုးအစားထဲမှာ လူကြိုက်များကြပါတယ်။ ဒုတိယမျိုးဆက်မှာ ပထမမျိုးဆက်စာလျှင် ဒီဇိုင်းမှာ တိုးမြင့်ထားတယ် ဆိုပေမဲ့ ပထမမျိုးဆက်ကိုသာ ရိုးရှင်းဆန်းပြားတဲ့ ဒီဇိုင်းတစ်ခုအနေနဲ့ လူကြိုက်များမှု ရှိနေမယ်လို့ ထင်မြင်မိပါတယ်။